Cristiano Ronaldo Oo Ka Dalbaday Real Madrid Inay Sameeyaan Saxiixyada Ciyaaryahanadan – Gool FM
(Real Madrid) 26 Abriil 2018 Wargeyska “Don Balon” ee dalka Spain ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in Cristiano Ronaldo uu ka dalbaday maamulka kooxda Real Madrid inay sameeyaan saxiixyada xidiga xulka qaranka Masar iyo kooxda Liverpool ee Mohamed Salah iyo goolhaayaha Manchester United David de Gea.
Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa wuxuu xiiseenayaa inuu sameeyo dhowr saxiixyo waaweyn suuqa soo aadan ee kala iibsiga, kadib markii ay isaga hareen xili ciyaareedkan tartamo muhiim ah sida horyaalka La Liga iyo Copa del Rey.
Kabtanka xulka qaranka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa aaminsan in saraakiisha Real Madrid ay doonayaan xili ciyaareedka soo aadan iibinta xidigaha Gareth Bale iyo Karim Benzema, sidaas darteed inay muhiim tahay lasoo saxiixdaan xidigaha Mohamed Salah iyo David de Gea.
Mohamed Salah ayaa xili ciyaareedkan ka sameenaya kooxdiisa Liverpool bandhig cajiib ah, kadib markii uu noqday xidiga sanadka ee horyaalka Premier League ugu fiican.
Salah ayaa dhinaca kale noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan shan horyaal ugu waaweyn ee qaarada yurub kadib markii uu dhamaan tartamada oo ididl ka dhaliyay 43 gool, halka 33 kulan uu ka ciyaaray horyaalka Premier League uu ku dhaliyay 31 gool, xili sidoo kale uu sameeyay 13 caawinaad.
Dhanka kale, Real Madrid ayaa dooneysa in 27 jirka shabaqa u ilaaliya kooxda Manchester United ee David de Gea ay lasoo saxiixato xili ciyaareedka soo aadan si uu ugu noqdo badalka goolhaayaha reer Costa Rica ee Keylor Navas.
Xiddiga Liverpool Sadio Mane oo cabsi laga muujinayo Markii lagu arkay Isbitaal kadib gushii kulanka Roma